Iwu: lezie anya, afọ nke nkwenye dị iche | | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Iwu Afọ nke nkwenye
Otu n’ime nsogbu kasịnụ nye onye ọ bụla taa bụ ịghọta echiche nke nkwenye n’ihe metụtara mmekọahụ. Ndị nne na nna, ụlọ akwụkwọ, ndị na-eto eto na ndị ọrụ iwu taa kwesiri inyere ndị na-eto eto aka ka ha na-agagharị na mpaghara mgbede ahụ n'etiti afọ 16 na 18. Na mpaghara a, iwu kwadoro inwe mmekọahụ mana ọ bụghị ịkekọrịta foto ọtọ. Teknụzụ ịntanetị na-eme ka okike na nnyefe ihe oyiyi na-akpali agụụ mmekọahụ nye onye ọ bụla nwere ekwentị, gụnyere nwatakịrị ọ bụla. Mmebi iwu mmekorita bụ 53% kemgbe 2006-7 dịka ọnụọgụgụ 2015-16 nke gọọmentị Scottish wepụtara. Nnukwu ịrị elu a dabara na ọbịbịa nke ịntanetị dị ukwuu.
Iwu gbasara mmebi iwu na England na Wales na na Scotland weere onye na-eto eto "nwa," na mkpa nchekwa, ruo mgbe afọ 18.
Otú ọ dị afọ ole nkwenye maka mmekọahụ bụ 16 afọ. Ọtụtụ ndị na-eto eto adịghị aghọta na n'agbanyeghị na ha karịrị afọ nkwekọrịta maka mmekọahụ, a naghị ekwe ha iwu ka ha weghara onwe ha ma zipụ ha ruo mgbe ha bụ 18 afọ. Enwere foto nke 'ụmụ' n'enweghị nkwenye bụ iwu na-akwadoghị. Nwatakiri n'okpuru 13 adịghị, n'ọnọdụ ọ bụla, nwere ikike iwu iji kwenye n'ụdị ụdị mmekọahụ.
Iwu bu nke a na-etinye aka na ndi okenye na obere onu ogugu umuaka ndi nwere mmasi n'ile umu ha na ha na-eme atụmatụ inwe mmekorita nwoke ma o bu ndi choro ime ka umuaka na-agba akwụna ma obu ndi ozo. Na iwu n'England na Wales na-ekwu, sị, “Childrenmụaka ndị na-agba akwụna bụ ndị a kasị emegbu emegbu na ndị na-erigbu ha site n'igbu ha, bụ ndị na-emetọ ụmụaka.”
Ugbu a nkọwa nkọwa nke 'nwa' pụtara na ndị nọ n'afọ iri na ụma na-enyocha ọchịchọ ịmata agụụ mmekọahụ ha, site n'enyemaka nke nkà na ụzụ ọhụrụ, a ga-ebo gị ebubo ọjọọ.
Ndị ọkàiwu na-ahụ maka iwu na-elezi anya ileba anya n'ụdị ọnọdụ niile ma mee ka ikpe bụrụ ikpe ma ọ bụrụ na ọ bụ mmasị ọha mmadụ ime ya.
Ha ga-eburu ihe ndị dị ka afọ dị iche iche dị iche iche dị n'etiti ndị ọzọ, njikọta n'etiti ndị ọzọ gbasara mmekọahụ, ahụ, mmetụta uche na mmụta na ọdịdị nke mmekọrịta ha.
Na 2014 na England, a na-enyocha nwa akwụkwọ ụlọ akwụkwọ mgbe ọ zitere enyi ya nwoke foto kachasị elu. O mesịrị nata nlezianya na o zigara ndị enyi ya foto ahụ mgbe ya na nwa agbọghọ ahụ kwụsịrị ịghọ di na nwunye. Iwu ọhụrụ, Omume Ọjọọ na Mmekọahụ Mmekọahụ, emekọ na 'ịbọ ọbọ porn' ntụgharị nnyefe nke ihe oyiyi mmekọahụ na-enweghị ikike. Hụ peeji dị iche na ịbọ ọbọ porn na ya.
Ihe iseokwu a bụ enweghị ma ọ bụ ikwupụta nkwenye. Okwute 'imegide' na-abanye na ụdị ọrụ a yiri ka ndị uweojii na ndị uweojii na UK na-anabata ya.
Gịnị bụ nkwenye na Iwu? >>